Siziheha kanjani i-Extreme Ego? - Mytika Speak
Ikhaya / Ukweqisa / Siziheha kanjani i-Extreme Ego?
I-Extreme Ego idonswa kokubi imizwa. Idonswa ikakhulukazi ekwesabeni futhi ichume lapho umuntu engaxhumekile kubo Okwangempela.
Nini ukuzazisa uhlangabezana nokuzithemba noma ukungazethembi, kuba okungalingani. Lokhu kushiya indawo yokuba u-Extreme Ego angene futhi abuse. Imvamisa iqala ngokwakha amabhulokhi ahlukanisa umuntu ngomzamo wokunqanda uthando ukuthi lungasabalali. I-Ego iheha ukuziqhenya ngenkathi i-Extreme Ego ibanga ukwesaba.
Emfanekisweni ongezansi, unxantathu ongezansi ukhombisa ukuthi amandla angahamba kanjani kusuka emizweni ye-Ego (eqala ukusuka kuNqatshelwe) aye kulawo we-Extreme Ego (Inzondo). Imibala ehlukene yegrey imele izinyathelo nezingqinamba ezibhekene ne-Extreme Ego ukuze ibuyele ezingeni lokulinganisela.
U-Extreme Ego uzondla ngokwesaba. Ngiyesaba engingakwazi ukukulawula. Noma kunzima kangakanani lokhu, manje sengiyazi ukuthi ngiyakwazi ukulawula imicabango yami. Ngokuletha imicabango emihle engqondweni yami futhi ngicabange ngemiphumela emihle, angondli umphefumulo wami no-True Self kuphela. Ngihola i-Extreme Ego endlaleni.
Amathegiukuqonda ukweqisa ngokweqile kakhulu ukukhula komuntu siqu ingokomoya